4.95m2 Qaabka Scandinavian-ka, Musqusha Lammaanahan Da'da yar xitaa way ka yaab badan yihiin qolka fadhiga!
Bogga ugu weyn / blog / 4.95m2 Qaabka Scandinavian-ka, Musqusha Lamaanahan Dhallinyarada ah Ayaa Xitaa Ka Wanaagsan Qolka Fadhiga
4.95m2 Qaabka Scandinavian-ka, Musqusha Lamaanahan Dhallinyarada ah Ayaa Xitaa Ka Wanaagsan Qolka Fadhiga
2020 / 10 / 15 Qoondayntablog 676 0
Dugsiga Ganacsiga Musqusha Ou Xiaowei
Gurigu waa halka aan jecel nahay inaan ka tirsanaano, oo aan la wadaagno qofka ugu dhow, waalidka ugu jecel, iyo carruurta ugu jecel. Hoyga, maahan oo kaliya qiimaha moodada, laakiin sidoo kale diirimaadka iyo heerkulka.
Kiiska maanta caadada u ah wuxuu ku saabsan yahay milkiileyaasha guryaha ku nool Quanzhou, kuwaas oo leh dhadhan gaar ah xagga moodada, sida naqshad shaqsiyeed, oo leh shuruudo sare oo lagu keydiyo musqusha.
Marka loo eego xaaladda dhabta ah iyo baahiyaha milkiilayaasha, naqshadeeye Peng Huiyan oo ka socda Quanzhou ayaa si gaar ah u xushay taxanaha Santa Monica ee ku habboon qoysaska da'da yar iyo kuwa moodada ah inay qaabeeyaan.
Degmada ： Kelleixiang Villa
Bedka: qiyaastii 4.95m2
Layout: Qaab-dhismeedka U-qaabeeya
Meelaha waxqabadka leh: Aagga dhaqida, aagga lagu maydho, aagga habboonaanta
Naqshadeeyaha, Peng, oo loogu talagalay mowduuca cusub ee Scandinavian-ka ee caan ku ah hadda. Nidaamka midabka Morandi moodada ah, dhereg hoose ee buluugga badda, cawl xeebta, deggan oo jilicsan. Khadadka fudud ee albaabbada albaabku waxay siinayaan booska shakhsiyad adag.
(Sawir dhab ah)
Xulashada darbigu waa dusiyeen laba jibbaaran oo cadcad, oo leh diiran dusha sare oo diiran, ka dibna 10 sano si fudud ugama dhicin.
Meesha lagu dhaqo iyadoo la isticmaalayo muraayad muraayad ah + kabadh dabaqad sudhan aag ku habboon in laga dhiso dhinaca musqusha ee golaha sare ee suuliga + isku dhafka sare ee golaha wasiirada, isku darka guud ee gelitaanka musqusha si kor loogu qaado in ka badan 50%, si qoyska oo dhami ay u helaan meel ay dhigaan sahayda musqusha.
1, Aagga Dhaqida
Martiso casri ah, sidee bay ku noqon kartaa iyada oo aan lahayn daryeel kala duwan oo maqaarka ah iyo alaab qurux badan. Naqshadeeye Peng wuxuu balaariyay awooda muraayada iyo wuxuu abuuray kabadh muraayad albaabka isku laabanaysa isku laaban si loo keydiyo daryeelka maqaarka iyo alaabada la isku qurxiyo. Sixirka quruxda ee ilaahaddu wuxuu ka bilaabmaa musqulaha maalinlaha ah iyo daryeelka maqaarka.
(Uruurinta Santa Monica PLWY19064)
Naqshad khafiifsan oo khafiifsan oo weelka miisaska dusha sare leh oo leh qasabad madow, nidaamka midabka madow iyo caddaan waa midka ugu caansan, oo aan waligiis ka bixin moodada. Qiimaha midabka sare ee weelka masraxa, iskudhafka guud ahaan miiska dusha sare inuu dhadhan farshaxan badan yahay, dareenka waayeelka oo buuxa. Weelka miisaska sagxadda dushiisa ku yaal waa fududahay in la rakibo, sidoo kale waa ku habboon tahay in lagu beddelo qaabka dambe.
(Taxanaha Santa Monica PLWY19064)
Birta madow waa shabaq kulul sanadihii la soo dhaafay, guri qurux badanina hubaal ma noqon karo qurxin la'aan. Ku hoos dhig muraayadda muraayadda muraayadda birta madow ee birta madow, samaynta dareenka moodada qaabka Scandinavian-ka oo caan ah.
Santuuqa laalaada ee la midka ah waa laga saari karaa waana lagu hagaajin karaa iyadoo la raacayo caadooyinka isticmaalka caadiga ah ee milkiilaha, waxaana la dhigi karaa bidix ama midig.
Muraayadda waxaa dhinac taagan albaabo laba-irridood ah oo dhererkeedu dhexe yahay kuwaas oo qaadi kara dhowr shay oo gudaha ku kala soocaya muraayadda dhalada ah, taas oo ka dhigaysa mid hagaagsan oo nidaamsan kuna habboon abaabul maalinle ah.
Naqshadeeye Peng wuxuu doortay xulkan musqusha naqshadeynta, kaliya ma ahan qiimaha wajiga in badan oo ka mid ah rabitaanka qoyska moodada yar. qaar ka mid ah faahfaahinta shaqada sidoo kale aad ayey "taxaddar" u tahay.
Weelka hoostiisa waxaa ku yaal khaanad khafiif ah oo qarsoon, inta badan waxay umuuqataa inay yihiin kabadh caadi ah oo furan, ilaa iyo inta khaanadda la jiidayo dhamaadka, waxaad kaheleysaa adduun weyn oo kadambeeya jahwareerka, booskaani wuxuu kufiican yahay in la dhigo waxyaabaha asturnaanta qaarkood.
2, Abaalmarin Aag oo Ku Haboon
Meel dhaqameed dhaqameed, marka laga reebo ku habboonaanta ku dhowaad qaab kale oo aan lahayn sanduuqyada nudaha, oo aad u fudud oo ceyriin ah. Naqshadeeye Peng wuxuu ka dhisay arimahan keydka ee hareeraha suuliga, awood balaaran, dareen buuxa oo nashqadeyn ah, kaliya ma sameyn karo keydinta, laakiin sidoo kale wuxuu ciyaari karaa door qurxin, wuxuu ku dili karaa laba shimbirood hal dhagax.
(Sawirka dhabta ah)
Qeybta hoose ee sabuuradda waa shelf furan oo ku saabsan 300mm oo dherer ah, taas oo sahleysa in la gaaro iyada oo aan kor loo qaadin oo la foorarin. Shukumaannada waraaqaha lagu qaato ka sokow, goobtani waxay qaban kartaa waxyaabo badan sida taleefannada gacanta, furayaasha, udugga, iyo inbadan.
Qeybta kore ee golaha wasiirada kaydinta alaabooyinka keydka ah sida jeermiska jeermiska, tuwaallada waraaqaha, iyo waxyaabo kale oo badan.
Sida qoysaska da'da yar badankood, milkiilayaashu waxay diiradda saaraan tayada nolosha, sidaa darteed waxay doortaan suuli wanaagsan. Marka loo barbardhigo musqusha caadiga ah, musqusha caqliga badan wuxuu leeyahay kursi kululeyn, dhaqo musqusha kadib iyo shaqooyin kale, si howsha suuligu u labanlaabo raaxada.
3, Abaalmarinta Aagga Qubayska
Wixii iyaga qubeys, waxay doorteen bir madow oo aad u qurux badan oo adkeyn karta. Matte bir madow oo leh dusiyo yaryar oo cad, waxay noqon kartaa inta ugu badan ee la isku daro.
Madaxyada maydhashada madow waxay caan ku yihiin qoysaska da'da yar, midabka madowna wuxuu leeyahay dareen qiimo leh, waa deeqsi iyo waara, mana u muuqan doono gabow sanado
Waa inaan la macaamilnaa musqusha maalin kasta, raaxo leh oo diirran, mood iyo qurux fiican leh, ayaa naga yeeli kara dhiirigelin maalin kasta. Miyaad ku dhaqaaqday qaab-dhismeedka guriga milkiilaha ee Kailai Xiang Villa, Quanzhou?
Hore:: Kohler Ayaa Maxkamad Si Weyn Loogu Yaqaano U Soo Bandhigay Shirkada Musqusha Ee Maxkamad In Ka Badan $ 1.4 Milyan Oo Khasaare Ah Next: Talooyinka Musqusha ee ugu Fiican Abid, Dhamaan Meel Kaliya!
WOWOW Chrome High Arc musqul Fucet USD95.00
WOWOW Laba Qalabka jikada Qulqulka Wejiga leh ee Birta Birta Birta Ah USD73.99